5 Best Cycling mudungwe munzira To Travel In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Cycling mudungwe munzira To Travel In Europe
Kungava mashoma mazuva kuedza kufunga kwako bhasikoro rachulis asi vachiri kunakidzwa yevedza kuchovha mudungwe munzira, kana ane paakaita 1,800km atasve kubva weCanterbury kusvika Rome, yedu 5 Best Cycling mudungwe munzira To Travel In Europe achaita kukukurudzira!
1. First yedu mazita 5 Best Cycling mudungwe munzira kuenda In Europe ndiyo: Passau, Germany To Vienna
Uyu haasi pamusoro chambotaurwa nezvacho bhasikoro giya fiddler. Nokuti zvishoma ruzivo, asi kwete zvikuru Tour De France nyanzvi yokuchovha bhasikoro, ichi ndechenyu!
A vhiki imwe wokutanga kutenderera nzira, taitofanira tsigira iwe kubata chitima pamusoro kumuganhu German kuna Passau, guta rakanaka apo nzizi Inn, Danube, uye Ils vanosangana. Akabvarura bikes kubva Matthias pa Drasch Bike Clinic uye chitiviri kure pamwe motokari isina nzira pedyo Danube.
Esterbauer anobudisa mutungamiriri muna Chirungu uyu Classic nzira: mepu dziri kwadzo (Regai kuedza kuchovha vachigere kuverenga kunyange. vakaedza kuti. Short nyaya; ndokuguma zvakaipa) The mepu vachakupai Mazano nokuti pokugara zvinyorwa uye nzvimbo mubereko munzira, kufanana Melk uye yeAustria muzambiringa uye muchero kukura munzvimbo. Fahrrad-Klinik ane urongwa ane hotera kumucheto Vienna apo iwe musiye bikes. Kupedza zuva kana kuti muna Vienna tisati takwira chitima kudzokera Linz uye achibhururuka kumba.
2. Cycle Route: Via Francigena, Itari
Nokuti inoona nezvenjodzi akadenha, ichi chinofanira kuva pamusoro wako 5 Best Cycling mudungwe munzira kuti rwendo mu Europe Pamazita. Ndicho wakarebesa signposted kutenderera nzira muItaly! The Via Francigena anomhanya kubva Great St Bernard Pass riri pamuganhu Siwizarendi kuti St Petro Basilica muRoma.
Kamwe outorwa nzira, zviri pamusoro chiuru makore. The nzira anotora vatasvi kuburikidza Tuscan nharaunda uye kare Ages maguta kufanana San Gimignano. Aizopa pachako vaviri mamwe mazuva chete Photo Kumira, neapo waini anoravira, uye kunakidzwa guru pasuo renyu muRoma.
Florence kuRoma Tickets
Kana uchida kuti rwendo rwako Inhau Yemhuri ipapo Danube Cycle Path ndiyo bheji rako zvakanaka! Zviri chimwe chezvinhu inozivikanwa uye zvakanaka akafamba bhasikoro pakutengeserana mu Europe. Saka hazvishamisi kuti mumwe 5 Best Cycling mudungwe munzira kufamba mu Europe.
It anotevera Danube rwizi kubva kwarwakabva mu Jerimani nzira yose kusvikira kuGungwa Black, asi zvikuru nevanhu tatamuka pakati kutevera ndicho 190 zvemakiromita (306 ? km) mugove pakati yevedza German musha Passau uye Vienna, Ositiriya. Anenge zvachose motokari isina uye nekaupenyu sandara, nzira-izvo ichi crisscrosses muganhu pakati Germany uye Austria muuzhinji vatasvi-akakwana kuti cyclists vemazera uye kugona.
iniT zvakaoma chaizvo kunyora chete kutenderera imwe nzira inopfuura sezvo zvakanaka Holland. Saizvozvo, yedu 5 Best Cycling mudungwe munzira kuenda mu Europe pandandanda aigona kuva akarurama Holland mudungwe munzira! Uyu nyika zvakadaro naka kuchovha kwezvivako kuti uri kuti vaitire chero iwe kutenderera! Zvichitevera Junction richikurukura signposted pakutengeserana, Vatasvi achitevedza 32,000 ? km kubva kutenderera makwara nomufaro sandara vane pfupi akareba pakati kosha dzakasiyana.
Ungave uri kutarisa kuongorora rugare mhenderekedzo yegungwa uye runako chiteshi nemisha Holland kuti Sea North nemhenderekedzo, nyika ine mavara girobhu rinokura minda, kana nzira kunhivi noutano guta guru Amsterdam, uchawana kutenderera nzira kuti embody zvose kukuru pamusoro kushingaira kuchovha panguva leisurely kumhanya.
5. The Cycle Route To Paris From Dieppe (kana London)
Zvingasava refu-kure vamwe (Waiva neni! Lol!) asi 127 zvemakiromita kubva Dieppe kuParis inopa wakanaka mazuva mashoma 'kuchovha! The yakakurumbira kutenderera nzira ndiyo Avenue Verte, asi yakanakisisa nzira yave Akapayona ne Donald Hirsch.
Donald kuti nzira
The makiromita nzira mangwanani meander kuburikidza zvishoma French misha, pamusoro rinopfungaira makata uye minda yezviyo nezviyo apfuura. Edza kuita waini anoravira zvakare nokukurumidza parwendo zvazvo! Migwagwa zvazvo kunyarara uye njodzi, uye pane chete zvikomo zvakakwana kuchengeta zvichifadza asi kwete netesa. VaDonald Website rine Links bhasikoro-ushamwari pokugara.
Paunenge pedo Paris, akasiyana Avenue Verte, ichi nzira anotora iwe kuburikidza akatevedzana youmambo kunovhima masango kudzivisa yomumugwagwa. pashure 120 makiromita mumisha, minda, uye kunovhima masango, Pamunopinda Parc St Cloud. Ndiyo imwe nzvimbo musango chete pashure Versailles, motokari vakasununguka, refu uye kururamiswa, uye bordered ne miti yakareba. ndokubva, munoona kuti mugwagwa anovhura kubva kune yakagadzirwa nharaunda, zvitubu, uye chinhu kudarika.
Donald kuti nzira kunokutorera kuruboshwe, saka hauna kuona zviri pakuguma enzira. Asi zviripo bhasikoro pane kuongorora. Ukaona uri padombo, nezvose Paris akatambanudzira pamberi penyu. It achasiya iwe kufema kubva maonero, kwete nesimba.
Ready kuwana chitiviri enyu uye sarudza rimwe 5 Best Cycling mudungwe munzira To Travel In Europe? Hukuru! nzvimbo dzose idzi dzinogona kusvikwa nechitima achibatsirwa Save A Train ehe saizvozvo! Saka kutanga kuronga uye kutanga kuchovha!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Cycling mudungwe munzira To Travel In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-cycling-trails-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code).
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Zh-CN kuti / of kana / ja uye mimwe mitauro.
#kuchovha #pedal Bike zvine moyo wakanaka yemhuri rwendo nenzira